Igumbi losapho kunye ne-entresol
Indawo ezolileyo yokuhlala kunye nesibonelelo sokulala kwakho ebusuku. Fumana kwisitrato sama-24, phakathi kwe-58 kunye ne-60 yesitalato, kufuphi neLake Yaysitkan kunye neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwiHotele ukuya eMandalay Royal Palace kunye ne-moat. Kwaye iikhilomitha ezingama-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMandalay. Isakhiwo samabali amahlanu esinamaziko anamhlanje kunye namagumbi angama-45 ewonke njengendawo ephezulu, ideluxe kunye negumbi losapho elinepenthouse. Ichibi eliphezulu eluphahleni libonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zesiselo esineemvakalelo zasimahla zembonakalo enomtsalane kunye nenduli edumileyo yaseMandalay.
Indawo ezolileyo yokuhlala kunye nesibonelelo sokulala kwakho ebusuku. Fumana kwisitrato sama-24, phakathi kwe-58 kunye ne-60 yesitalato, kufuphi neLake Yaysitkan kunye neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwiHotele ukuya eMandalay Royal Palace kunye ne-moat. Kwaye iikhilomitha ezingama-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMandalay. Isakhiwo samabali amahlanu esinamaziko anamhlanje kunye namagumbi angama-45 ewonke njengendawo ephezulu, ideluxe kunye negumbi losapho elinepenthouse. Ichibi eliphezulu eluphahleni libonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zesiselo kunye neemvakalelo zasimahla zomdlalo owonwabisayo kunye nenduli edumileyo yaseMandalay emantla kunye nentaba entle yaseShan ngasempuma.
Onke amagumbi eendwendwe aza ne-air conditioning, iflat-screen TV enetshaneli zesathelayithi, iketile kunye nekofu/ukwenza iti, ishawa, isixhobo sokomisa iinwele kunye nedesika. Ehotele amagumbi eze negumbi lokuhlambela elibanzi labucala elinezixhobo zangasese zasimahla.
I-La Carte, iinketho ze-continental kunye ne-buffet yakusasa zifumaneka rhoqo kusasa kwi-Hotel The Haven.
Njengokuvula kunikezelo olukhethekileyo ukusuka nge-01st Agasti ukuya kuma-31st ka-Agasti 2019, isaphulelo sama-20% sokutya & nesiselo & ne-10% isaphulelo sokuhlanjwa kwempahla kuzo zonke iindwendwe zangaphakathi.
Indawo ezolileyo yokuhlala kunye nesibonelelo sokulala kwakho ebusuku. Fumana kwisitrato sama-24, phakathi kwe-58 kunye ne-60 yesitalato, kufuphi neLake Yaysitkan kunye neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwiHotele ukuya eMandalay Royal Palace kunye ne-moat. Kwaye iikhilomitha ezingama-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMandalay. Isakhiwo samabali amahlanu esinamaziko anamhlanje kunye namagumbi angama-45 ewonke njenge…
Beka eMandalay kunye ne-Mintha Theatre efikelelekayo ngaphakathi kwe-1.3 km, i-Hotel The Haven inikezela ngokungena ngokukhawuleza kunye nokuphuma, amagumbi angatshayiyo, iibhayisikili zamahhala, i-WiFi yamahhala kunye negadi. Indawo nganye yokulala kwihotele eneenkwenkwezi ezi-3 ineembono zesixeko, kwaye iindwendwe zinokonwabela ukufikelela kwibhari nakwithafa. Indawo yokulala ibonelela ngedesika engaphambili yeeyure ezingama-24, inkonzo yegumbi kunye nenkonzo yamatikiti kwiindwendwe.